Taliska nabadsugida Gobolka Banaadir oo soo bandhigay Rag lagu sheegay Al-shabaab – SBC
Taliska nabadsugida Gobolka Banaadir oo soo bandhigay Rag lagu sheegay Al-shabaab
Posted by Webmaster on Diseenbar 9, 2012 Comments
Taliska Hay’ada Nabad sugida gobolka Banaadir ayaa waxaa uu maanta ku soo bandhigay xarunta nabadsugida ee magaalada Muqdisho rag uu sheegay in ay ka tirsanaayeen xarakada alshabaab oo isku soo dhiibay xarunta taliska hayada.
Gen Qaliif Axmed Ereg taliyaha ciidamada Nabadsugida gobolka banaadir ayaa saxaafada u sheegay in ragani ka tirsan xarkada Alshabab oo tiradoodu gaareyso 2 nin ay isku soo dhiibeen ciidamada Nabadsugida islamarkaana ay horay xilal kala duwan uga soo qabteen xarakada Alshabaab gaar ahaan gobolka Shabeelaha hoose waa sida Taliyuhu hadalka u dhigay’e.
Dhinaca kale taliyaha nabadsugida ayaa ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ee ay ku qaadeen isbaarooyinka sharcidarada ah ee yaalay magaalada Muqdisho isagoona sheegay in howlahaas ay ku guuleyteen .
Waxa uu intaasi ku daray taliye Ereg in isbaarooyinkaas gebi ahantood laga qaaday muqdisho islamarkaana ay muqdisho iminka ka madaxbanaantahay isbaarooyin jidadka la dhigto oo dadka baad loogaga qaado.
Sikastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ay hay’adaha nabadsugida ka hadasho arimaha amaanka gaar ahaan qaadista isbaarooyinka iyo weliba soo bandhigista rag ka tirsanaa xoogaga xarakada Alshabaab.
Maxamuud Cismaan Warsame